Axmed Madoobe oo ka hadlay muranka ka jira Maqaamka Muqdisho. – War La Helaa Talo La Helaa
Axmed Madoobe oo ka hadlay muranka ka jira Maqaamka Muqdisho.
By Nuurka Nuurka	 On Feb 12, 2018
Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” hogaamiyaha Jubbaland oo ka qayb-galayay xaflad sagootin ah oo xalay loogu sameeyay Muqdisho madaxda maamul gobaleedyada ayaa ka hadlay Maqaamka Caasimadda oo waqti badan soo jiitameysay.
Axmed Madoobe, waxa uu sheegay Maqaamka Caasimadda in mar walba meel loo jiido oo mararka qaar lagu eedeeyo in ay heystaan Madasha iyo Baarlamaanka aysan xal ahayn, wuxuuna tilmaamay arrintan in ay tahay mid Dastuuri ah, muhiimna ay tahay in la qaxeexo Maqaamka Caasimadda Soomaaliya ee Muqidsho iyo mida Gobolka, qof walba oo Soomaali ahna ay dan ugu jirto.
Ilaa hada waxaa muran ka taagan maqaamka Muqdisho, waxaana khilaafkii ugu dambeeyay ee arintaan la xariirta xilkiisa ku waayay Guddoomiyihii hore ee gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed.
Fiirso:Sadex Hees oo xul ah iyo Fanaaniintii Barisamaadka ee (Somalia) Xabiibo Tooxoow,Maxamed Lafoole,iyo Ustaad Yusuf Arbac
Duqa muqdisho oo xaflad sagootin ah u sameeyay Madxda maamul gobaleedyada.